Iiprotheyini eziPhakamileyo kunye nokutya kweenja zeCarb ezisezantsi - Inja Isondlo
Oonodoli Ne Zinto Izilwanyana
Iiprotheyini eziPhakamileyo kunye nokutya kweenja zeCarb ezisezantsi
Abanini abaninzi bezilwanyana bayaziphephaukutya kwenjaiqulethe ii-carbohydrate ezininzi. Ukuba ufuna iprotheni ephezulu kunye nokutya kwenja esezantsi, kuya kufuneka wazi malunga neentlobo zokutya okuthengiswayo.
Ukuchazwa kweProteni ephezulu
Ukuveliswa kokutya kweenja kulandelwa imigangatho ebekwe ngulo Umbutho wamaGosa oLawulo lweeNdawo zaseMelika (IAAFCO). Inani elincinci leprotein ekutyeni kwenja kwabantu abadala liipesenti ezili-18 kunye neepesenti ezingama-22 zenjana kunye nokutya kwezinja ezikhulelweyo kunye nabanyisayo. Izinja ezisebenzayo , njengeizinja zemidlalo, Zifuna malunga neepesenti ezingama-25, kunye nezinja zemidlalo, njengeizinja ezirhuqwayo, malunga neepesenti ezingama-35. Iprotheni ephezuluukutya kwenjainye kuluhlu oluphezulu ngaphezulu kwama-22 eepesenti ukuya kuma-65 eepesenti ngenja eqhelekileyo. Kuya kufuneka ukhethe inqanaba leprotein esekwe kwi Inqanaba lomsebenzi wenja .
Iiprotheyini zokutya zokupheka
Iimbaleki ezili-15 eziphambili zeVegan + zokutya okuNamandla abazithandayo
Ukutya izinja ezinezifo zesibindi seCanine
Xa ujonga ipesenti yeeprotein kukutya kwenja, jonga umgangatho weeproteni .Imithombo yeprothenikufuneka ibonelele ngee-amino acid eziyimfuneko kwaye ijolise kwiiproteni ezisekwe kwinyama.
Ukuchazwa kweCarb esezantsi
Ukuba ujonga kwizithako zokutya kokutya kwenja, phakathi Iipesenti ezingama-30 kunye nama-70 zii-carbs . Ukutya okune-carbohydrate encinci kuya kuba malunga neepesenti ezingama-30 okanye ngaphantsi. Funa iikhabhohdi ukusukaImithombo esemgangathweni ephezulunjengeziqhamo kunye nemifuno. Kuphephe ukutya ngengqolowa, umbona, igluten, irayisi yotywala, umgubo we-oat, kunye nomgubo wesoya.
Ngaba izinja zifuna iiCarbs?
Ukwanda kwe-carb ephantsi, ukutya okuneprotein ephezulu kungakhokelela ekucingeni ukuba ii-carbohydrate azilunganga ezinjeni. Kuyinyani ukuba izinja azidingi iicarbohydrate ukuze zikhule kwaye azizalisekisi naziphi na iimfuno zesondlo eziyimfuneko. Nangona kunjalo, iikhabho ezisemgangathweni inokuzuza inja ngokubonelela ngefayibha kunye nezondlo ezingazukufumana kwezinye iintlobo zokutya. Banokunyusa amandla enja kwaye bagcine amazinyo abo ecocekile ngokunjalo. Benza umsebenzi obalulekileyo ekubeni ii-carbs ziyafuneka ukulungiselela inkqubo ye-kibble. Uninzi lwee-carbs ezikumgangatho osezantsi zinokunciphisa amandla enja okufumana izakhamzimba kukutya kwayo. Ukutya okune-carb ephantsi kunokuba ngcono kwizinja ezinesifo Hypertriglyceridemia ,ukudumba komzimba,isifo seswekilekwayeumhlaza. Kwelinye icala, izinja ezinesifo sokungabikho komzimba kunye nezifo zesisu ezinjengesifo samathumbu esivuthayo zihlala ziphucula ukutya okune-carb ephantsi.
Ungazibala njani iiCarbs ekutyeni kweNja
Abanye babanini bezilwanyana bafuna ipesenti esezantsi yee-carbs ngaphakathiukuthelekisa nokunye ukutyaNgelixa abanye befuna iukutya okungenazinkozo. Abavelisi abafuneki ukuba baprinte ipesenti ye-carbohydrate kukutya kwabo. Unga uqikelelo ngokuthatha iiprotein, amafutha, kunye nomxholo wokufuma kunye nokuzikhupha kwiipesenti ze-100. Emva koko, yongeza malunga neepesenti ezisibhozo zomlotha. Umzekelo, ukutya kuneepesenti ezingama-50 zeprotheyini, iipesenti ezili-10 zamafutha, neepesenti ezili-10 zamanzi. Thabatha iipesenti ezingama-70 ukusuka kwiipesenti ezili-100, uze uthabathe iipesenti eziyi-8, ezishiya iipesenti ezingama-22 ze-carbohydrate.
Umxholo weprotein ojikeleze iipesenti ezili-9 usenokungabonakali uphezulu. Ukutya okunkonkxiweyo ikakhulu kukufuma, kungoko ziipesenti ezili-9 ngokomthamo wezithako eziseleyo. Ukutya okusemathinini kunye nomswakama oqhelekileyo wama-75 ukuya kuma-78 ekhulwini, izithako eziseleyo zingama-22 ukuya kuma-25 ekhulwini, kunye neepesenti ezili-9 malunga neepesenti ezingama-30 zezithako.
Iiprotheyini eziphezulu Ukhetho lokutya kweenja zeCarb
Uninzi lweeprotheyini eziphezulu kunye nokukhetha ukutya kweenqatha ezisezantsi kunokuba nzima ukufumana kodwa kunokufumaneka kwiivenkile ezizodwa zezilwanyana kunye nakwi-Intanethi.
IWysong Epigen 90
Ngaphezulu Uluhlu lweDogfood.co Ukutya okuphezulu kweprotein kwenja, IWysong Epigen ineepesenti ezingama-63 zeprotheyini esekwe kwinyama. Ikwangukuphela kokutya okungenasitatshi, ngokusekwe kumabango eWysong. Umxholo wefayibha yipesenti ezi-3 kunye namafutha ali-16 ekhulwini. Izithako eziphambili zibandakanya inkukhu yendalo, isidlo senkukhu, isidlo se-turkey, iproteni yeetapile, kunye neprotein yokutya. Ingxowa yeepawundi ezi-5 imalunga ne- $ 28, ibhokisi eneepawundi ezingama-20 imalunga ne- $ 100, kwaye ityala elingama-40 eepawundi liphantse layi- $ 200.
Iindidi ngeendidi zeProteni ePhambili yeNdalo
Oku ukutya kwenja eyomileyo kuluhlu oluphezulu lokutya okuphezulu kweprotein kuba iipesenti ezingama-95 zeprotheyini zivela kwinkukhu okanye kwidada endaweni yeeproteni ezisekwe kwizityalo okanye kwisidlo sezilwanyana. Ukutya kukwangokutya okuziinkozo, umbona, ingqolowa, isoya, kunye nokutya okuvela kwimveliso simahla. Kwakhona lukhetho oluhle kakhulu kubantu abafuna i-carb ephantsi, i-free-free, kunye ne-potato-free dog dog. Inkuku okanye idada ukutya okomileyo kuneepesenti ezingama-47 zeprotein, iipesenti ezili-17 zamafutha, kunye neepesenti ezi-3 zefayibha. Izithako eziphezulu zibandakanya inkukhu okanye idada, amaqanda, itapioca, amanqatha enkukhu, iflakisi yomhlaba, kunye nencasa yendalo. Inguqulelo yenkuku ifumana i-4.9 ngaphandle kwe-5 yokulinganiswa kweenkwenkwezi kunye nedada efumana iinkwenkwezi ezi-5. Ingxowa yeeponti ezingama-20 yenkukhu okanye idada imalunga $ 80 , kunye nengxowa yeepawundi ezi-4 zokulunywa okuncinci malunga $ 27 .
Ukutya kweNja yaseOrijen Tundra
IOrijen ifumana umlinganiso weenkwenkwezi ezi-5 kuMcebisi wokutya kweenja. Babo I-Tundra yeBhayiloji efanelekileyo yeBhokhwe engenasimahla, iBhokhwe, iVenison, idada kunye nenyama eyomileyo yokutya kweenja ineepesenti ezingama-38 zeprotheyini kunye neepesenti ezili-16 zeecarbohydrate ezisezantsi. I-Orijen lukhetho olufanelekileyo kwiprotheyini ephezulu, ukutya okunamafutha asezantsi kunye nokutya okune-carb ephantsi. Izinto zokuqala ezintlanu yibhokhwe entsha, ingulube entsha yasendle, inyamakazi entsha, itsha entsha, kunye nedada elitsha. Ingxowa engama-25 eepawundi ijikeleze $ 114 .
Uhambo lwaseMelika limited Ukutya kwezithako
Ukutya okunkonkxiweyo kufumana ireyithingi yeenkwenkwezi ezi-5 kubasebenzisi Chewy.com . I-Recipe yenkukhu kunye nePatato ayinazinkozo kwaye ineepesenti ezingama-9 zeprotheyini, iipesenti ezi-6 ze-fat, i-1.5 yepesenti yefayibha, kunye neepesenti ezingama-78 zokufuma. Ezona zithako zintlanu ziphezulu kule carb iphantsi ukutya kwenja yinkukhu, umhluzi wenkukhu, isibindi senkukhu, iitapile kunye neflakisi. Ityala le-12.5-ounce cans limalunga ne- $ 24.
I-Merrick Backcountry Grain yasimahla ye-96% yenkomo yokwenyani
Izinto zokuqala ezintlanu oku kutya enkonkxiweyo Yinyama yenkomo enedibhoni, umhluzi wenkomo, isibindi senyama, imveliso yeqanda eyomileyo, kunye nenkcubeko yegwele eyomileyo. Ifumana umlinganiso weenkwenkwezi ezi-5. Akunakho okusanhlamvu ngeepesenti ezili-10 zeprotheyini, iipesenti ezingama-3.5 zeoli, iipesenti ezi-3 zefayibha kunye neepesenti ezingama-78 zokufuma. Ityala le-12 12.7-ounce cans imalunga $ 35. Nangona oku enkonkxiweyo, ukutya sisonka esinokusikwa okanye sicocwe ukuze inja yakho ikonwabele.
Ukunyaniseka kokutya kweNja okuDibeneyo kokutya kweNja
Oku kutya kuthengiswa 'njengodidi olusezantsi lokutya kwenja' kwaye ujonge kwizithako kunye nokulungiselela, kulula ukubona ukuba kutheni. Izinto zokuqala ezintlanu ziyinkukhu, i-organic flaxseed, iitapile, iseleri kunye neebhatata. Ukutya kwenziwa ngeemveliso ze-organic ezintsha kumaziko okutya abantu. Ukutya kuneepesenti ezingama-24 zeprotheyini, i-15% yeoyile kunye ne-6.5% yefayibha ekrwada. InjaFoodGuide ukhetha iKhitshi elithembekileyo njengenye yeendlela zabo ezintlanu eziphezulu zokutya kwenja ye-carb. Ibhokisi eneepawundi ezili-10 yile malunga needola ezingama-66 .
Ukutya kweenja ezomileyo zeKetona kwiiNkukhu ezindala zokupheka inkukhu
Amabango kaKetone ukuba yinto yokuqala 'yohlobo lwayo' yokutya kweenja ezinomxholo we-carb xa kuthelekiswa nokutya okuluhlaza kodwa ngexabiso le-kibble. Izinto zokuqala ezintlanu ziyinkuku, iprotein ye-ertyisi, i-ertyisi eluhlaza komhlaba, i-oat hulls kunye nenqatha lenkukhu. Inama-carbs angaphantsi kwe-8% kunye neeproteni ezingama-46%. Abathengi kwiAmazon bayinika ukulinganiswa kweenkwenkwezi ezi-5. Ingxowa ephawulwe ngo-24.2 ithengiswa malunga ne- $ 107.00 .
Iiprotheyini eziphezulu ze-DIY kunye nokutya kweNja yeCarb ephantsi
Unokwenza ukutya kwenja yakho ukuba ukhetha njalo. Naziimithombo yeeprotheyini eziphezulu, Iiresiphi zokutya zenja ezisezantsi kwi-intanethi. Iresiphi evela Okunencasa-Lowcarb.com isebenzisa ezi zinto zilandelayo:
Iiponti ezi-2 zenyama yenkomo
Iiponti ezi-2 zomhlaba turkey
Amathini amabini e-8 ounce ityhuna okanye i-salmon (epakishwe emanzini)
I-1/2 ipounds yeenkukhu zeenkukhu
I-1/2 indebe ye-cottage cheese
1 indebe yerayisi emhlophe ephekiweyo kwileyibhile imiyalelo
I-ounces nganye yeebhatata eluhlaza eluhlaza, i-ertyisi eluhlaza ephekiweyo, icauliflower eluhlaza kunye ne-broccoli eluhlaza
I-1/2 ye-apile ephakathi, ekhutshiweyo kunye nembewu
Iipuniwe ezi-3 zeoyile yekhokhonathi
Bilisa ii-gizzards zenkukhu kangangemizuzu eli-10 de iphekwe. Yongeza amaqanda amathathu kwimizuzu yokugqibela kwithumba elinzima.
Pheka inyama yomhlaba de ibe nsundu, susa amanqatha ukhulule isitovu.
Sila ii-ertyisi, i-broccoli, i-cauliflower, i-apile, i-gizzard kunye namaqanda kwiprosesa yokutya. Kuya kufuneka wenze oku kwiibhetshi ezimbini kuxhomekeke kubungakanani beprosesa yakho.
I-Microwave ibhatata emnandi imizuzu emithathu ukuya kwemine de ibe ithambile.
Hlanganisa zonke izithako kwimbiza enkulu, ukongeza kwintlanzi enkonkxiweyo. Yongeza i-cottage cheese kunye neoli ngasekupheleni xa umxube upheka.
Ukwahlula ukutya kuphume kwiingxowa zefriji okanye kwizikhongozeli. Le recipe ibhalwe ngokwaneleyo kwizinja ezilisithoba zeepawundi ke kuya kufuneka uqikelele inja yakho yesayizi.
Unokufumana ezinye iindlela zokupheka kwi-Intanethi ezinje:
Iprotein ephezulu ye-DogNoteBook, i-Low-Carb Chicken - le recipe kulula ukuyenza kwaye ibandakanya inkukhu yomhlaba, irayisi, imifuno exubileyo, kunye nezongezo.
DamnDelicious unayo iresiphi elula yezinja eyi-50% yeeprotein (i-turkey), i-25% yemifuno kunye ne-25% yeenkozo kodwa ungazitshintsha ezo pesenti ngokusekwe kwiimfuno zenja yakho.
ICanineJournal Inendlela yokupheka yenkukhu engenazinkozo yemicu yenkukhu enabanini abanomdla wokulondolozwa kwezilwanyana ezilungiselelwe ukuthengisa.
Ukuqwalaselwa okhethekileyo kokutya kwezinja ezinesifo seswekile
Izinja ezinesifo seswekile zihlala zibekwa Iiprotheyini eziphezulu, ukutya okuncinci kwenja . Naziphi na iicarbohydrate kwizithako kufuneka zibe yi-glycemic esezantsi enceda amanqanaba eswekile yegazi. Ukutya okunee-carbs ezingama-30% okanye nangaphezulu kunjalo zininzi kakhulu ii-carbs inja yeswekile. Izinja zombini ezinesifo seswekile kwaye zityebe kakhuluifuna ukufaIphezulu kwifayibha yokubamba ukunciphisa ubunzima bayo, okanye ugqirha wezilwanyana unokucebisa ukongeza kwisongezo sefayibha. Kukwakho nayo ukungavumelani okuthile ngaphezulu kwenqanaba lamafutha kukutya kwenja yeswekile. Amanqatha aphezulu ngokuqinisekileyo kufuneka aphetshwe kodwa unokufumana uluvo olwahlukileyo phakathi kwezilwanyana ukuba ngaba kufanelekile ukuba kube phakathi okanye kutyebile. Olunye ukhetho olucetyiswayo lwezinja zesifo seswekile zezi:
Isicwangciso sePurina Pro sokutya kwezilwanyana kwi-OM - Oku kutya kwenja enkonkxiweyo kufumaneka ngugqirha kuphela. Ine-7.5% yeeprotein, i-1% yeoyile (ubuncinci), i-6.5% yefayibha (ubuninzi) kunye ne-82% yokufuma. Ithengisa malunga ne-34.00 yeedola kwimeko yeetoti ezili-12. Iyafumaneka kwifayile ye- ifomula eyomileyo I $ 85 yengxowa engama-32 yeepawundi eneepesenti ezingama-26 zeprotheyini, ama-4 ukuya kuma-8.5% amafutha, kunye ne-16% yefayibha. Zombini iifomula ezomileyo nezimanzi zifumana uphononongo lweenkwenkwezi ezintlanu kubasebenzisi beChewy.com.
Ukutya kweRoyal Canin yeZilwanyana kwiCanine Glycobalance -Oku kukunye ukutya okufumana amanqaku aphezulu kubasebenzisi beChewy.com abaneenkwenkwezi ezi-4.8 kwezi-5. Iyafumaneka ngugqirha ovela kugqirha wezilwanyana. Ityala leenkonkxa ezingama-24 limalunga ne- $ 68.00. Ukutya kwenja ye-carb esezantsi kwezinja zeswekile ine-7.5% yeeprotein, i-2.5% yeoyile, i-3.5% yefayibha (ubuninzi) kunye ne-82% yokufuma. Ngu ukutya okulinganayo ine-35% yeeprotheyini, i-10 ukuya kwi-14% yamafutha, kunye ne-10% yefayibha. Ingxowa yeephawundi eyi-17.6 ithengisa malunga ne- $ 53.00.
Inja yemihla ngemihla inezintlu ezintlanu zokutya Ukukhetha okuphezulu kwezinja ezinesifo seswekile . Ukongeza kwi-Merrick esele ikhankanyiwe, i-Orijen kunye neRoyal Canin, bayacebisa I-CORE ye-Wellness ye-Natural Grain yasimahla yokutya kweNja ethengisa malunga ne- $ 63 yeengxowa ezingama-26. Banga ukutya kwabo kunenyama engama-80% ngaphezulu kokunye ukutya kwenja okune-34% yeeprotein, ama-16% amafutha kunye ne-4% yefayibha. I-Wellness Core iza neencasa ezininzi kwaye iyafumaneka kuhlobo olunkonkxiweyo. Iyafumana 4.3 kwiinkwenkwezi ezi-5 ngabasebenzisi kwi-Amazon.com.
Ukutya okuNcedisayo kwiinja zeSwekile
Abanini bezinja zesifo seswekile kufuneka bakuthathele ingqalelo ukongeza ukutya okutsha kwizidlo zenja yabo nanjengokuphathwa. Abanye ukutya okufanelekileyo zezi:
Imifuno enjengeembotyi eziluhlaza, iminqathe, ii-ertyisi, isikwashi sasebusika (esiphekiweyo), iparsley, ihlumelo, ibrokholi, ikholifulawa, ii-beet, imifuno yesaladi
Isardadi okanye ityhuna (ipakishwe emanzini)
Plain ithanga enkonkxiweyo
Umkhenkce inyama eyomileyo enjengesibindi, isalmon kunye nemisipha yenkomo
Ukutya okulunye ekufuneka ukwenzile thintela ibhotolo yamandongomane , enamafutha neswekile eninzi. Nangona kunjalo, ezinye ii-vets ziyacebisa usebenzisa uhlobo olunamafutha asezantsi ngexabiso elincinci kwiseleri njengonyango, okanye ibhotolo yealmond.
Ukutya kweenja ezisezantsi kweCarb kunye nosulelo losulelo
Abanye abathandi bokutya kwenja abasempilweni Izakubanga ukuba usulelo lwegwele luziswa kukutya okuphezulu kwe-carb enesitatshi esininzi kunye neswekile. Nangona kunjalo ngokwePetMD , inqanaba leswekile kunye nesitashi ekutyeni kwenja akunakwenza mahluko kwinani leswekile efunyanwa lulusu. Usulelo lwegwele luziswa kukwalana komzimba okanye ukuphazamiseka komzimba kwaye kufuneka lunyangwe ngugqirha wezilwanyana onokuthi axoxe nawe malunga nokukhetha ukutya okusempilweni.
Ukutya kweenja zeCarb ezisezantsi kunye noMhlaza
Ngokwe- Inkonzo yezokondla kwezonyango kwiziko lezonyango laseCummings , Akukho bungqina bufunyenwe ngophando lokuba izidlo ezisezantsi ze carb zingcono izinja ezinomhlaza xa kuthelekiswa nokunye ukutya. Ukutya okune-carb ephantsi kuhlala kucetyiswa izinja ezinomhlaza ngenxa yenkolelo yokuba ii-carbs ezisezantsi ziya kunciphisa inani leswekile eliya kwiiseli zomhlaza. Nangona kunjalo, njengosulelo lwegwele, ukutya okune-carb ephantsi akuyi kuba nawo umahluko oncomekayo kwinani leswekile eya kwiiseli. Ugqirha wezilwanyana uGqirha Susan Ettinger we Inja yoMhlaza weNja icebisa ukugxila kumgangatho weecarbohydrate owondla ngayo inja enje ngeziqhamo, imifuno, kunye neenkozo ezikumgangatho ophezulu.
Fumana i-Right-Protein yokutya kweNja yakho
Khumbula ukuba yonke inja yahlukile ke kungafuneka uvavanye iimveliso ezimbalwa. Qinisekisa ukuba inqanaba leprotheni lilungele inqanaba lomsebenzi wenja yakho yemihla ngemihla.
Iingubo Zokuhlamba Iimpahla New Cars Ikampu Ukutya Iiindlela Cocktail Iindlela Zokupheka Imitshato Imiboniso Yesilayidi
Ukufa Imiboniso Yesilayidi
Kwigumbi Lokuhlambela Ukuphinda Usebenze Kwakhona Iimbono
Imeko Yendalo Esingqongileyo
Mens Historical Clothing
Isicwangciso Board Games
Umsebenzi Udliwanondlebe Tips
I-Pizza Pasta Bhaka
Amagama angama-70 aMandla aThetha uBomi baMakhwenkwe okanye amaNtombazana
Yimalini ingxowa yokulinganisa kunye nokuGquma?
ngowuphi umnwe ekufuneka unxibe iringi yesithembiso
inde kangakanani inqaba ye-eiffel ngeenyawo
ungasebenzisa i-windex ukucoca ibhodi yokucima eyomileyo
uthini ulandelelwano oluchanekileyo lwamanyathelo okucoca nokucoca izixhobo ngesandla
ukuba ngumthengisi we-poker
Ngubani virgo ehambelana kakhulu
ungazi njani ukuba umntu oneentloni uyakuthanda engakhange athethe
Uyakhuthaza Jew Jewelry